Usezibiza ngomfowabo kaJesu obeyinyanga | News24
Usezibiza ngomfowabo kaJesu obeyinyanga
Durban - Ushiye angalazi kubefundisi bamatende uZamokwakhe "Bhaka" Nzama wodumo lwezimbiza, osengumfundisi weKuphileni Power of King Bhaka's God Ministries - ethi yena useyindodana kaNkulunkulu esesigabeni esithi masilingane neseNkosi uJesu.
Ekhuluma phambi kwamalunga ebandla lakhe ePinetown Civic Centre ngeledlule, uBhaka uthe kubo bonke abefundisi abadumile abathi basindisiwe, akekho noyedwa ongenayo inyanga akhendla kuyona ukuze kugcwale abantu ebandleni lakhe.
Uthi ngisho bethandazela abantu, basebenzisa izilwane ezigingqa phansi amakholwa bese bethi ngamandla abaphiwe wona enza lokhu kanti phinde, abantu bashaywa ngemfe iphindiwe.
OLUNYE UDABA:Kutholane phezulu uBhaka noMzimba okhala imali
"Akekho umuntu ongaguli ndawo ongavele awiswe wukubekwa isandla uma ethandazelwa.
"Into ewisa abantu yilezi zilwane (abefundisi) abazisebenzisayo. Zibenze badideke umqondo babenenzululwane bese begingqika. Imvamisa yalabo bantu abawiswayo kabasindi ekuguleni okubaphethe, oyisishosha uvuka eseyisona, onenkebenkebe yesilonda avuke sisekhona.
"Baze basizwe wukuza la enkonzweni bese bethola ukuphulukiswa okuvela kuNkulunkulu okungaxutshwe nalutho," kusho uBhaka.
Impilo ephezulu, wukuhambela imicimbi ephezulu, apepenyeke nosaziwayo, uthi sekuwumlando kuyena uBhaka njengoba esezibiza ngomfowabo kaJesu.
Ekhuluma neLANGA uBhaka, uthe ngeke esaphinde abonakale emcimbini emikhulu ehlanganisa abantu abaningi - kubalwa neyezindondo - ngoba lo omthumile usefuna asize abantu ngomthandazo.
"Kangisesiyena uBhaka lo enimaziyo kodwa sengiyinkosi uBhaka esesigabeni esithi masifane neseNkosi uJesu. Ebandleni lami noma yikuphi lapho ngihamba khona, sengibizwa ngenkosi."
"Kangizikhethelanga lokhu kodwa yisigaba uNkulunkulu angibeke kusona. Ebandleni kuke kufike abantu asebethwelwe ngengubo begula ngiphume ngiye emotweni ngiybuza kulo onhithumile ukuthi ngimenze njani lo muntu, ngibuze ukuthi unayiphi inkinga bese engitshela, umuntu ahambe esephil esezihambela," kusho uBhaka.
Thola udaba oluphele kwiphephandaba ILANGA.